Gudoomiye Degmo oo lagu dilay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Gudoomiye Degmo oo lagu dilay Muqdisho
Gudoomiyaha ayaa shalay kasoo laabtay dalka Turkiga oo looga soo daaweeyay dhaawac kasoo gaarey Qarax sanadkii tagey lagula eegtay Gaari uu watay wadada 21-ka October ee Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiyihii degmada Hodon, ee gobolka Banaadir C/xakiin Ciise Dhegajuun ayaa xalay ku dhintay Is-rasaaseyn ilaaladiisa iyo Ciidan katirsan booliska Soomaaliya ku dhexmartay jidka Aadan Cadde, ee magaaladda Muqdisho.
Lama oga sababta keentay Is-rasaaseynta, ee uu ku dhintay gudoomiyaha, laakiin waxuu duqa Muqdisho u xil-saarey gudi baaris ku sameeyay dhacdadan oo ahayd mid argagax leh oo Mas'uul maamulka gobolka kamid ahaa lagu dilay.
Shalay ayay ahayd markii gudoomiyaha Yaaqshiid qarax miino uu ka badbaadey, iyadoo maalintii ka horeysay labo mas'uul oo katirsanaa Maamulka Garasbaaley lagu dilay qarax wadada dhinaceeda la dhigay duleedka Muqdisho.
Qoraalka kasoo baxay Xafiiska Cumar Filish:
0 Comments Topics: muqdisho qarax soomaaliya